I Tsiranana Philibert dia olom-pirenena malagasy, filohan' i Madagasikara tamin' ny 1 Mey 1959 hatramin' ny 11 Oktobra 1972.
Teraka tamin' ny taona 1912 tao Ambarikorano, Mandritsara ao amin' ny faritanin' i Mahajanga izy. Nianatra tao amin' ny sekoly ambaratonga voalohany tao Anjiamangirana tao Antsohihy izy. Nanohy ny ambaratonga faharoa fototra tao Analalava tamin' ny taona 1926, ary ny taona 1930 no nidirany tao amin' ny sekoly Le-Myre-de-Vilers; tao no nahazoany ny diplaoma naha-mpampianatra azy tamin' ny faha-roapolo taonany. Rehefa nampianatra nandritra ny 12 taona izy dia nanao fanadinana hiditra tao amin' ny École Normale de Montpellier tamin' ny taona 1946, ka rehefa vita ny 4 taona nianarany tao dia nampianatra tao amin' ny Fampianarana Teknika tao Antananarivo.
1 Valisoa azon' i Philibert Tsiranana
4 Ireo filoha nifandimby
Valisoa azon' i Philibert Tsiranana[hanova | hanova ny fango]
Nomena ny mari-pankasitrahana "Chevalier de l'Étoile d'Anjouan" tamin' ny 1949,
1952 : voafidy ho Mpanolotsain' ny Faritanin' i Mahajanga.
2 janoary 1956 : voafidy ho solombavambahoaka tao amin' ny Faritra Andrefana.
1956 : tamin' ny faramparan'io taona io no nananganany ny antoko Parti Social Démocrate de Madagascar (P.S.D).
Mey 1957 : voatendry ho ministra ; avy teo voatendry ho filoha lefitry ny Mpanolotsain' ny Governemantan' i Madagasikara.
Jolay 1958 : notendrena ho filohan' ny Mpanolotsain' ny Governemanta.
14 Oktobra 1958 : nomem-boninahitra ho Filohan' ny Governemanta vonjimaika rehefa nambara ho Repoblika miankin-doha i Madagasikara.
1 Jolay 1959 : nivory ny Antenimieram-pirenena ka nametraka ny fitokisany - tamin' ny alalan' ny vato 113 amin' ny mpifidy 114 - tamin' ity zanaka tantsaha avy any Anahidrano, Antsohihy ho Filohan' ny Repoblika Malagasy voalohany.
26 Kiona 1960 : nahazo ny fahaleovantenany madiodio i Madagasikara.
13 Mey 1972 : tolon' ny mpianatra teo amin' ny Kianjan' ny Fahaleovantena teo Analakely, ka nahatonga ny fionganan' ny fitondrana Tsiranana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsiranana_Philibert&oldid=1042602"
Voaova farany tamin'ny 29 Desambra 2021 amin'ny 11:41 ity pejy ity.